तपाईको राशि पनि प–यो ?: यी ४ राशिका पुरुषप्रति महिलाहरु हुरुक्कै !3Ghumti
2077 श्रावण 28 बुधबार
तपाईको राशि पनि प–यो ?: यी ४ राशिका पुरुषप्रति महिलाहरु हुरुक्कै !
देश | 2019-11-15 11:49:00 |
ज्योतिषको माध्यमबाट कुनै पनि ब्यक्तिको व्यक्तित्व, विशेषता, भविष्य, प्रेम, ब्यवसाय तथा धनलगायतका बिषयमा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यी बाहेक अरु पनि धेरै प्रकारका जिज्ञाशालाई ज्योतिषशास्त्रमा खुलाइएको छ । यस मध्येको एक रोचक जिज्ञाशा हो, जीवनसाथी वा प्रेमीप्रेमीका ।
हरेक पुरुष आफ्नो महिला मित्रले आफुप्रति चासो दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने जान्न चाहन्छन् । ज्योतिषशास्त्रमा यी ४ राशिका पुरुषहरुप्रति महिला आकर्षित हुने बताइएको छ ।
महिलाका विषयमा मिथुन राशिका पुरुष लक्कि मानिन्छन् । यो राशिका पुरुषले कुनै पनि महिलाको ध्यान आफूतिर खिच्न वा आकर्षित गर्न मेहनत गर्नु पर्दैन । मिथुन राशिका ब्यक्तिको व्यक्तित्व नै महिलालाई आर्कषित गर्ने मामलामा काफी हुने गर्दछ ।
यस राशिका पुरुष कोमल मनका र रोमान्टिक स्वभावका हुने गर्दछन् । जसका कारण महिलाहरु सजिलै यो राशिका पुरुषप्रति आर्कषित हुने गर्दछन् ।
सिंह राशि भएका पुरुषको मन कोमल हुनुका साथै सफा हुने गर्दछ । यो राशिका ब्यक्ति कुनै पनि नातालाई राम्रोसँग निभाउने गर्दछन् । अत्यधिक रोमान्टिक स्वभावका सिंह राशिका पुरुषहरु महिलालाई जिस्क्याउने शैलीमा आर्कषित गर्न माहिर हुन्छन् ।
सिंह राशिका ब्यक्तिको उपस्थिति मात्र महिलालाई प्रभावित बनाउने अस्त्र बन्ने गर्दछ । यो राशिका ब्यक्तिमा केही लजालु स्वभाव हुने गर्दछ, जसलाई संवेदनशील महिलाले मन पराउने गर्दछन् ।
तुला राशि भएका पुरुषका आँखामा एक अनौठो खूबी हुने गर्दछ । जसले सुन्दर महिलाहरु चाडैं उनीहरुतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यो राशिका पुरुषमा अलग स्टाइल, अनेकौं रुप निभाउने क्षमता, तथा प्रेमप्रति सद्भाव हुने गर्दछ ।
यो राशिका पुरुष महिलाको कमजोरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन् । जसका कारण उनीहरु महिलाको मनको कुरा बुझेर सोही अनुसार ब्यवहार गर्न सक्ने हुन्छन् । महिलाले आफूलाई बुझ्ने मानिस पाउन मरिहत्ते गर्दछन् ।
लुक्सको मामलामा मकर राशिका पुरुष सबैभन्दा लक्कि मानिन्छन् । यो राशिका पुरुष देख्नासाथ कतिपय महिला पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने गर्दछन् । मकर राशिका पुरुषहरु सुन्दर ब्यक्तित्वको साथै जो कोहीलाई प्रभावित पार्ने क्षमताको हुने गर्दछन् ।
यो राशिका पुरुषको हरेक स्वभाव, बोल्ने शैली, अरु भन्दा निकै भिन्न हुने गर्दछ । जसले महिलालाई आर्कषित गर्ने गर्दछ । साथै मकर राशिका पुरुष एक्टिभ र स्मार्ट समेत मानिन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १३९ जनामा कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप १३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा...
बुधबार नेपालमा थप ४८४ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । बुधबार नेपालमा थप ४८४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा...
किस्ट अस्पतालको आईसीयूमा एक उपचाररत ७७ वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं । ललितपुरको किस्ट अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत अर्का एकजना कोरोना संक्रमितको पनि...
रामेछाप दोरोम्बाका दुबै मृगौला पिडित तामाङको आर्थिक सहयोगको अपिल
काठमाडौं, २८ साउन । रामेछाप, दोरोम्बा गापाका स्थानीय ३५ वर्षिय सुक्लाल तामाङको दुबै मृगौलाले...
सोमबारदेखि हराइरहेका कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बानियाँ मृत फेला
काठमाडौँ । सोमबारदेखि हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाँ मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । ...
वीरेन्द्रनगरमा थप १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार १९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ...
प्रदेश १ मा ६० हजारको कोरोना जाँच गर्दा १,५०० को रिपोर्ट पोजेटिभ
विराटनगर । पछिल्लो चार महिनामा प्रदेश १ मा ६० हजार बढीको पीसीआर जाँच भएको छ । गत २८ चैतयता...
प्रेम र विवाहको नाटक गरि युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपीत पक्राउ
काठमाडौँ । प्रेम र विवाहको नाटक गरेर युवती बलात्कार गरेको आरोपमा थानकोट प्रहरीले धादिङ घर...
मोरङका थप एक पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
विराटनगर । मोरङका थप एक पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य...
खानेपानी मन्त्रीद्वारा चार उपभोक्ता संस्थाहरुलाई गाडीको चाबी हस्तान्तरण
‘पहिलो नजर’मा उमेश र सरस्वतीको रोमान्स्
खेलमा पैसाको सट्टाबाजी गरेको अभियोगमा पक्राउ
कांग्रेसको बित्तिय तथा सहकारी विभागको सचिवमा भण्डारी
नेप्सेमा सामान्य अंकले सुधार
अवैध रुपमा भन्सार छली ल्याउँदै गरेका सामान बरामद
मादक पदार्थ सेवन गरी टिपर चलाएको अभियोगमा पक्राउ